Galmudug oo qabanaysa doorasho si gaar ah indhaha loogu hayo | KEYDMEDIA ENGLISH
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Magaaladda Dhuusamareeb waxaa ka dhacaysa Maanta doorasho kuraasta qaar xiiso gaar ah leh, oo indhaha lagu hayo Musharixiinta kusoo bixi doonto.
Afar Kursi ayaa lagu dooranayaa Caasimadda Galmudug, oo uu ku jira Kursi uu u tartamayo C/samad Maclin Maxamuud, oo ah wiilka hogaamiyaha Alu Sunna
Kursiga sumadiisu tahay HOP139 oo uu horay ugu fadhiyay Cabdixakiin Macalin Axmed, oo loo wareejiyay Aqalka Sare, ayaa ku tartamaya Cabdisamad Macalin Maxamuud iyo Xamdi Shire Cali, oo la rumeysan yahay inay malxiis tahay.
Kursiga 3aad ee HOP051 oo horey ugu fadhiyay Xasan Macalin Maxamuud ayaa waxaa kula tartamaya Xuseen Maxamed Nuur iyo Maxamed Geedi Cawaale.
Sidoo kale, Kursiga 4aad ee HOP061 oo ku fadhiyay Cabduweli Maxamed Qanyare, waxaa kula tartamaya Dayax Axmed Cumar iyo Cabduqaadir Abuukar Cabdi.
Waxaa la filayaa in raggii hore ee siyaasadda ku gaamurey ay kusoo baxaan, iyadoo Qoor-Qoor ka baqayo in hadii ay waayaan kala kulmi karo culeyso siyaasadeed.
Doorashadda Aqalka Hoose waxaa lagu heshiiyay in lasoo gabagabeeyo 25-ka Bishan, oo ka dhiman 22 maalin, waxaana dhiman in ka badan 60% kuraasta Gollaha Shacabka oo ka kooban 275.
Comments Topics: doorashadda galmudug soomaaliya